Maxay ka wada hadleen Wakiilada Beesha Caalamka & Madaxweynaha Puntland? - Awdinle Online
Maxay ka wada hadleen Wakiilada Beesha Caalamka & Madaxweynaha Puntland?
“Wuxuu ahaa kulan wakhti fiican qaatay, Puntland waxay la wadaagtay sidii looga gudbi lahaa marxaladda lagu jiro , sidii loo heli lahaa Doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu kalsoonyahay, oo sharciyad wanaagsan dalka u yeelata.
Aad baan uga mahadcelinaya in ay wafdigan noo yimaadaan waxaan rajeynayaa qodobadii aan ka wada hadalnay oo dhan inay ahaadaan qodobo dhaxal-gal noqon doona, oo wax ka tari doona deganaashaha dalka iyo horusocodka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, waxaana u rajeynaya mushtamaca Soomaaliyeed marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen inay uga ambabixi doonaan marxalad deganaasho iyo nabadgelyo ay ku dheehantahay” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni.
“Waxaan ku boorrineynaa dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliya in ay ku sii dhegganaadaan go’aankooda la xiriira iskaashiga iyaga ka dhexeeya xilli diyaar-garowga doorashadu uu horumar sameeyey ayuu yiri” mudane Raisedon Zenenga.
Previous articleDowladda oo Maamul Goboleedyada ku eedeysay dib u dhac ku yimaada doorashada
Next articleMusharax Madaxweyne Mustaf Dhuxulow oo la xiray